Ahoana ny fomba hisafidianana mixer-tena, tadidio ireo teboka efatra ireo
1 、 Fenoy ny masontsivana ara-teknikan'ilay mpampifangaro tena, ohatra, azontsika atao ny mijery hoe iza avy ireo maotera fiara voafantina, ohatrinona ny volavola ary sokajy azo ampiharina. 2, mahafehy ny lazan'ilay mpanamboatra mixer beton mihinana mandeha ho azy, ary safidio ny sasany ...
Fampidirana ny kamio mixer beton
Ny kamio mixer konkritika mandefa tena SITC dia mizara karazany roa: kodiarana tokana eo aloha sy kodiarana finday kodiarana finday eo aloha. Noho ny fivezivezeny mety sy haingana ary ny fiasa tsotra dia mampifangaro sy mifangaro. Ampiasaina betsaka amin'ny fananganana sivily amin'ny tanàna ambanivohitra sy housi ...
Momba ny SITC
Simple (Weifang) International Trade Co., Ltd (SITC) dia vondron'orinasa miavaka amin'ny varotra fanafarana sy fanondranana. Ny SITC dia niara-nanangana mpanamboatra milina injeniera marobe. Ny vokatra ao aminy dia misy ny mpamily Skid steer, Loader kely, Backhoe loader, Excavator, Road rollers, Mixers, Mixer t ...